Ungayihlaziya njani iindevu-Iingcebiso zoBuhle kumadoda aSisitayile | Amadoda aQinisekileyo
UAlicia tomero | | Chetyiwe, Ukunyamekela
Hlaziya iindevu yenza isitayile esisebenzayo kwaye loo nto ibonisa umtsalane ebusweni bendoda. Ukwenza le gradient kufuneka usebenzise isitshetshe esisebenza njenge susa ivolumu kwiinwele ngokwendalo. Ukuze ukwazi ukwenza oku, kuya kufuneka utshintshe amanqanaba omatshini kwaye ufuna ukuchaneka kwaye wazi amanyathelo athile.
Njengomgaqo jikelele, kumashumi eminyaka eyadlulayo iindevu zazishiywa zide okanye zisuswe. Namhlanje sinokufumana iindlela ezininzi kunye nokusika okumema ukuba wenze oko kusika okunciphisa iinwele ezindevini. Kwabaninzi yigradient elula, ekwabizwa ngokuba yi yenza mnyama okanye iphele.
1 Oomatshini bokuhlazisa iindevu
2 Uzihlazisa njani iindevu
3 Yenza isiphumo somgangatho
4 Ukukhathalela emva kokuthotywa isidima
Oomatshini bokuhlazisa iindevu
Kukho oomatshini abaye babalulekile ekunyamekeleni iindevu zendoda. Akukho zitshetshe ziyilwe ngokukodwa ukuba zisikwe okanye zicime, kodwa ziyilelwe ukunciphisa iinwele kunye lola umda weenwele, iindevu kunye necala.
Oomatshini abanikwe amandla ebhetri benza inkululeko eninzi, kodwa ngokuhamba kwexesha banokulahleka amandla abo. Kude kube ngoku, ezo zisasetyenziswayo ngentambo ziyacetyiswa, ukuze zingaphulukani namandla azo kwaye zibonelele ngokugqibelela okungcono.
Sikunika oomatshini abathile onokubafumana kwi-Intanethi okanye ukuze uthelekise kwiivenkile zakho eziqhelekileyo. Kukho uphawu lweHysoki HK-701 eyilelwe ukucheba intloko kodwa isebenza ngokugqibeleleyo njenge Ukuthotywa kweendevu. Ixabiso layo alifikeleli kwi-50 euros. Olunye uphawu yiWahl DETAILER T- Wide CORDLESS ngexabiso elingaphezulu kwe- € 120, kodwa ifikelela koko ijonge ukufumana, yiyo loo nto ithengiswa kakhulu eMelika. Umatshini weWahl BERET Prolithium Mini oMnyama usebenza ngakumbi, awunantambo kwaye une-ergonomic. Ifikelela kwi-100 Euro kwaye iyasebenza kwaye ikulungele oko ithambeka ogqibeleleyo.
Ukucoca intshebe phantse kufiphala yindlela yeFade leyo kufuna ubuchule kunye nomonde. Ayisiyo gradient elula, kodwa kuyimfuneko ukugxininisa yonke loo migca okanye amanqaku athe avela xa ethoba isidima kwaye kufuneka enziwe anyamalale ngokupheleleyo.
Ukuba unentshebe ende kwaye ikhulile kufuneka yenza ukusika kubude bayo. Eyona nto ixhaphakileyo kukwenza ngesikere kwaye usike iziphelo kude kufike ubude obufunwayo, kodwa bufutshane ngokwaneleyo ukuqala ukusebenzisa umatshini.
Kuya kufuneka usete umatshini kwelona nqanaba lisezantsi kwaye uqale coca ezantsi kweendevu. Siqala ezantsi kwe nut kwaye sisebenze ukuya esilevini.
Siyaqhubeka nokucheba iindevu ukuzihlengahlengisa kwinqanaba 1 okanye 2. Kuya kufuneka uhlengahlengise oku kuchukumisa igradient elandelayo ngokwenza gxininisa iinxalenye ezidleleni.
Umphezulu wesidlele kufuneka uhambe uchetyiwe ngokupheleleyoKuyimfuneko ukuba kususwe nabuphi na ubuhle obuvelayo. Ngexesha lokuyenza, sukujolisa ekwenzeni kumgca othe ngqo, qiniseka kuphela ukuba ususa bonke obo buhle ungafuniyo ukububona.
Yenza isiphumo somgangatho
Ngoku lixesha lokwenza igradient iyonke. Sibeka umatshini wethu kwelinye lawona manqanaba asezantsi kwaye sinako sika icala elinye lobuso. Kufuneka uyenze ukusuka emazantsi entamo kwaye usebenze ngendlela enyukayo, isilevu phezulu.
Kuya kufuneka uqhubeke ngaphezulu kwesilevu kwaye ulandele isidlele de ufike kwinxalenye yetempile, apho iinwele zizalwa khona. Kule ndawo kufuneka udlale kunye namanqanaba ukwenza isiphumo esimnandi nesonakalisiweyo.
Kuhleli kuphela ukuphinda kwelinye icala lobuso. Kuya kufuneka uqale ukusuka emazantsi entamo kwaye khwela kancinci kancinci. Siza kuqhubeka nokuthotywa kwemimandla yonke de sifike kwindawo yokutshiswa kwamacala.
Ukukhathalela emva kokuthotywa isidima
Ukuba uthanda ukugcina umgca wegradient yakho kuya kufuneka cheba iindevu zakho kube kanye ngeveki. Ukusetyenziswa kweemveliso ukucoca ulusu kuyacetyiswa, kufuneka usoloko uyenza ngesikhumba ifumile kancinci. Sincoma i-Eau Thermale de Avène emva kokucheba i-cream ehambisa amanzi, ithintele iibhaktheriya kwaye inefilimu ekhuselayo yokunyamekela ubuso.
Enye ikhrimu sisithambisi kunye noAloe Vera osuka kwi-Nezeni Cosmetics. Sebenzisa izithako zendalo kunye nomgangatho ophezulu kwaye ngokugqibeleleyo. Ithintela ukungezwani komzimba kunye nokucaphuka kwaye ilungele ulusu olubuthathaka. Esinye isiphakamiso yi-Aftershave Balm L´Eau D´Issei evela ku-Issey Miyake, uphawu olutsha lwaseJapan. Ithambe kakhulu, ilula kwaye i-creamy iya kuhlaziya kwaye yondle ulusu.
Ukuthambekisa ubuchule kuyindlela yokunceda ukufezekisa iindevu zokucheba kunye nesitayile. Kuyinxalenye yendlela yesiqhelo efuna umonde kunye nokuhamba kakuhle kwesandla sakho. Musa ukuphelelwa lithemba ukuba iphuma okokuqala, unokuhlala ukhulisa iindevu zakho kwaye uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde kwakhona Ukuze ufunde okungakumbi ngeendevu ungafunda iingcebiso ezilungileyo zokhathalelo lwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Uzihlazisa njani iindevu
Ukwazi njani ukuba uyawuthanda umfazi
Ukutya okunotye zinc